ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၀-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- အခြေခံဥပဒေအား ပြည်သူ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံခဲ့သည်ကို မယုံကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အရေးကြီးဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်ဦးလွင်လူထု လိုအပ်ချက်များကို မေးမြန်း click
- ဦးရွှေမန်းလည်း သမ္မတ ဖြစ်ချင် click
- ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အသံပေးကြပြီ (ဆောင်းပါး) click
- သမ္မတသစ် ဘယ်သူဖြစ်မလဲ (ဖိုရမ်) click
- ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပြည်သူ့လိုအပ်ချက် (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- သျှမ်းပြည်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်နှင့် သမ္မတကြီးတို့ ယနေ့မနက် တွေ့ဆုံမည် click
- သမ္မတနှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ ဆွေးနွေး click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် တွေ့ဆုံ click
- တာချီလိတ် SNLD ရုံးဖွင့်ပွဲ၌ ရှမ်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး တွေ့ဆုံ click
- ပုသိမ် NLD ရုံးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရုံး ဖွင့်လှစ် click
- ငွေရတုပြည့်မယ့် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ် သံဃာတော်တွေကို ပင့်ဖိတ် (ရုပ်သံ) click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများ အကြမ်းဖက်ခံနေရဆဲ click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ဆက်လက် အကြမ်းဖက်ခံနေရဆဲဟုဆို click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများ အိမ်ပြန်ရေး စဉ်းစားပြီ click
- မလေးရှားတွင် သေဆုံးသည့် မြန်မာများ သံရုံးခွင့်ပြုချက်မရသဖြင့် မသင်္ဂြိုဟ်ရသေး click
- မလေးရှားတွင် ဆက်တိုက် တိုက်ခိုက်ခံရမှု မြန်မာနိုင်ငံသား ၆ ဦးထက်မနည်း သေ click
- မလေးရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အစိုးရက လုံးဝမမေ့ထားဘူး – ဦးရဲထွဋ် (မေးမြန်းခန်း) click
- အစိုးရအဆက်ဆက် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝရပ်ရန် ၈၈ တို့ တောင်းဆို click
- လက်ပံတောင်းစီမံကိန်း ဆန်ကျင်ဆန္ဒပြသူများကို နိုင်/ကျဉ်းစာရင်းတွင် သွင်းမည် click
- လှိုင်သာယာ အောင်မြေတွင် စုပေါင်းဆန္ဒပြနေ click
- တော်ဝင်သစ်အချောထည် စက်ရုံလုပ်သားများ ပြန်လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်း click
- ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီပိုင် မြေများ လယ်သမားများထံ ပြန်ပေးရန် ပြင်ဆင် click
- လယ်မြေသိမ်းပြဿနာကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန် AFFM မှ တရားဝင် ကြိုးစားနေခြင်း click
- အသိမ်းခံလယ်သမားများ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြန်ရရေး ဥပဒေအရ ကြိုးပမ်းရာတွင် အခက်ကြုံနေ click
- လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့် တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေးတာဝန်ခံ မစုစုနွေးနှင့် အင်တာဗျူး (ရုပ်သံ) click
- ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၂၈ ဖွဲ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ၈ ချက် ထုတ်ပြန် click
- ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ ဖြစ်ဖို့ ကွန်ရက်အဖွဲ့တွေ တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- ကချင်စစ်ပွဲတွင်း ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးသွားသူများအတွက် ရန်ပုံငွေရှာ click
- ကချင်စစ်ပွဲ ရက်ပေါင်း ၇၃ဝ သတင်းဓာတ်ပုံပြပွဲ ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ် (ရုပ်သံ) click
- ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များ ကျောင်းမတက်နိုင်သေး click
- စစ်ဒဏ်ကို ကချင်ပြည်သူလူထုက ဆက်ပြီး မခံစားနိုင်တော့ဘူး (အင်တာဗျူး) click
- 'ဝ' ဒေသရှိ စိုက်ခင်းများ ဘိန်းခင်းဟု စွပ်စွဲမှု စားတော်ပဲပင်သာဖြစ်ဟု ငြင်းဆို click
- အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးရပြီး KNU ပါတီပြန်ထောင်ပါက ပူးပေါင်းကူညီမည်ဟု KPP ဥက္ကဌ ပြောဆို click
- ဗိုလ်မှူးကြီးဖောဒိုနှင့် အင်တာဗျူး click
- ရွာသားများအား ရိုက်နှက်ခဲ့သူ အစိုးရတပ်ရင်းမှူး ခြိမ်းခြောက်မှု ဆက်လုပ်နေဆဲ click
- ရာဇာမင်းကား ဓားပြတိုက် လူသတ်မှု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်စပ်ဟု ဆို click
- သထုံမြို့နယ်တွင် မှန်လုံယာဉ်တစီး ဓားပြတိုက်ခံရ၊ ၂ ဦး သေဆုံး click
- ကျိုက္ခမီ-ရန်ကုန် ခရီးသည်တင်ယာဉ် ဓားပြတိုက်ခံရ click
- လိုင်စင်မဲ့ကားများ ဖားအံ-မြ၀တီ ပြေးဆွဲခွင့် ပိတ်ပင်တားဆီးတော့မည် click
- အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာဥပဒေကြမ်းအပေါ် စာနယ်ဇင်းကောင်စီ အကြံပြု click
- တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ ရခိုင်ဒေသ ရလဒ် (ဆောင်းပါး) click
- သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးစဉ် (၆) click
- ဒီမိုကရေစီ အသိနှင့်အရှိ (ဆောင်းပါး) click
- ပေါ့ပ်ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံရေးစီလီဘရစ်တီ (သူ့အတွေး သူ့အမြင်) click
- အရိုးနဲ့ အရင်း (ကာတွန်း) click
- သယံဇာတအခြေပြုမှ ပညာအခြေပြုနိုင်ငံအဖြစ် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ပညာရေးညီလာခံမှ ပြောဆို (ရုပ်သံ) click
- ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ညီလာခံမှ တိုင်းရင်းသားအသံများ click
- ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်မှ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် click
- စစ်တွေ အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွက် အိန္ဒိယက မြန်မာကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ ချေးမည် click
- ထားဝယ်ဒေသ ရေရှည်တည်တံ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြီးဆုံး click
- ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် လုပ်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီကို ဆန္ဒပြ click
- ဟံသာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် PPP စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်မည် click
- ကော့သောင်းတွင် မြန်မာ့လေယာဉ် ပြေးလမ်းချော် click
- မြန်မာ့လေကြောင်း လေယာဉ်တစီး ကော့သောင်းတွင် လမ်းချော် click
- ကော့သောင်းတွင် လေယာဉ်ဘီးပေါက် လမ်းချော်မှုဖြစ် click
- ရန်ကုန် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ click
- ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်တွင် မီးလောင် (ဓာတ်ပုံ) click
- သတိဆွဲခိုင်းပြီး ပါရိုက်ခံရတဲ့ ရဲတပ်သား (ပေးစာ) click
- မုတ်သုန်မိုးနဲ့အတူ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အစ ရန်ကုန်မြို့လမ်းတွေ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဆိုးရွား (ရုပ်သံ) click
- အမေ့အိမ် ကျောင်းခွဲများကို သိန်း ၇၀၀ နီးပါး ထောက်ပံ့မည် click
- ချင်းပြည်နယ် ၁၀ တန်း စာမေးပွဲအောင်ချက် တိုးလာပေမယ့် တပြည်လုံးတွင် အောင်ချက် အနိမ့်ဆုံးဖြစ် click
- တက္ကသိုလ်ဒစ်ဂျစ်တယ် စာကြည့်တိုက်စနစ်ကို အော့ဖ်လိုင်း သုံးနိုင် click
- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့ လူထုလှုပ်ရှားမှု ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ် click
- ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားတို့၏ မီးလုံးလွှတ်ပွဲတော် ကျင်းပ click
- အောင်ကိုလတ်ရဲ့ “ကယန်းအလှ” ရွှေကြက်ဖရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဝင်ပြိုင်မည် click
- ကချင် ရေခဲတောင်ပေါ်သို့ ဦးတေဇ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံကြိုးစားတက်ဦးမည် click
- ဆီးဂိမ်းအတွက် တိုင်းရင်းသားအက ပါဝင်တင်ဆက်ဖို့ စတင် လေ့ကျင့်နေကြ click
- မြန်မာ့မြေမှာ ခက်ခက်ခဲခဲ ဂိုးသွင်းခဲ့ရတဲ့ မန်ချက်စတာ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း click
- မန်ယူကစားသမားဟောင်း ၄ ဦးနဲ့ မြန်မာဘောလုံးသမားတွေ ရန်ပုံငွေပွဲ ၈,၀၀၀ ကျော် အားပေး (ရုပ်သံ) click
- ဟောလိဝုဒ် မှတ်တမ်းသစ်နှင့် ဂျက်ကီချန်း click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:42 PM
ဇွန်လ ၁၁ ရက် မနက် မှာ NLD ၀က်ဆိုက် ဖွင်.ကြည်တယ်။
မလေးရှား မှာမြန်မာတွေ အသတ်ခံရတဲ. သတင်း တစ်စွန်း
တစ်စတောင် လုံးဝ (လုံးဝ) မပါဘူးဗျာ ။
.... NLD ၀က်ဆိုဒ် ကို ကြိုးနီ နဲ.ချည်ထားသလိုဘဲ ။
.. ဘယ်သူရဲ.ကြိုးနီလဲဗျာ ။
.. သတင်း အဖြစ်တော. ရှိနေသင်.ပါတယ် ။
.. လောကကြီး ...... ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲ ။
NLD နဲ. ၈၈ ဟာ ကျွန်တော်.ရဲ. hero တွေပါ ။